ခပ်ညံ့ညံ့ အမျိုးသားတွေရဲ့စကားလုံးတွေကြားမှာ မနစ်မြောစေပါနဲ့…😏😏 – Trend.com.mm
ခပ်ညံ့ညံ့ အမျိုးသားတွေရဲ့စကားလုံးတွေကြားမှာ မနစ်မြောစေပါနဲ့…😏😏
ယောက်ျားတိုင်းကိုမဆိုလိုဘူးနော်…ကိုယ်ပြောချင်တာ လူရယ်ဖြစ်လာပင်မဲ့တာဝန်မကျေ စည်းမစောင့် သိက္ခာမရှိတဲ့ခပ်ညံ့ညံ့ယောက်ျားမျိုးပါ။ ရှင်သန်လာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ရယ် ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းမကောင်းတာရယ်ပေါင်းလိုက်တော့ လူတိုင်းကမတူညီတဲ့ ဗီဇတွေ စိတ်ဓာတ်တွေကွဲပြားသွားတာမဆန်းပါဘူး။ဒါပင်မဲ ဘယ်အရာမဆို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမှရတာမလို့ခပ်ညံ့ညံ့ ကောင်တွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေထိုင်တာလဲ ဒီခပ်ညံ့ညံ့လူတွေပါပဲ…ဆိုတော့ ကိုယ်ပြောပြောနေတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ယောက်ျားမျိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲ…ဘယ်လိုပေတံနဲ့တိုင်းတာပြီးများပြောလိုက်တာလဲ ပေါ့မေးကြလိမ်မယ်…ကိုယ်တိုင်းတာတဲ့ပေတံကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ…
(၁) မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အပျော်တွဲတဲ့ယောက်ျား
(၃) လိမ်ညာမှုကို အလွယ်လေးထမင်းစားရေသောက်ပြောတတ်တဲ့ယောက်ျား
(၇) သစ္စာတရားကို ခဏအတွင်း စိတ်မထိန်းပဲချိုးဖောက်နိုင်တဲ့ယောက်ျား
ဒီလိုယောက်ျားမျိုးဟာ သင့်မိသားစုထဲမှာပဲရှိနေရှိနေ သင့်ချစ်သူအနေနဲ့ပဲရှိနေရှိနေ အချိန်မလွန်ခင် သူ့ရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်ကနေ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့လွတ်မြောက်
အောင်ကြိုးစားပါ။ လောကကြီးမှာ မွန်မြတ်ပြီးစည်းစောင့်သိက္ခာရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေအများကြီးရှိတာမလို့ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀အတွက် ပင်ပန်းစေတဲ့ ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကို ဝေးဝေးကရှောင်ပြီး သူတို့အပြောတွေအောက်မှာ မနစ်မွန်းပါစေနဲ့….
ယောကျြားတိုငျးကိုမဆိုလိုဘူးနျော…ကိုယျပွောခငျြတာ လူရယျဖွဈလာပငျမဲ့တာဝနျမကြေ စညျးမစောငျ့ သိက်ခာမရှိတဲ့ခပျညံ့ညံ့ယောကျြားမြိုးပါ။ ရှငျသနျလာတဲ့ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့ရယျ ပငျကိုယျစိတျရငျးမကောငျးတာရယျပေါငျးလိုကျတော့ လူတိုငျးကမတူညီတဲ့ ဗီဇတှေ စိတျဓာတျတှကှေဲပွားသှားတာမဆနျးပါဘူး။ဒါပငျမဲ ဘယျအရာမဆို ကိုယျတိုငျဖနျတီးမှရတာမလို့ခပျညံ့ညံ့ ကောငျတှဖွေဈအောငျဖနျတီးနထေိုငျတာလဲ ဒီခပျညံ့ညံ့လူတှပေါပဲ…ဆိုတော့ ကိုယျပွောပွောနတေဲ့ ခပျညံ့ညံ့ယောကျြားမြိုးဆိုတာဘယျလိုလဲ…ဘယျလိုပတေံနဲ့တိုငျးတာပွီးမြားပွောလျိုကျတာလဲ ပေါ့မေးကွလိမျမယျ…ကိုယျတိုငျးတာတဲ့ပတေံကတော့ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေးပါပဲ…
(၁) မိနျးကလေးတဈယောကျကို အပြျောတှဲတဲ့ယောကျြား
(၃) လိမျညာမှုကို အလှယျလေးထမငျးစားရသေောကျပွောတတျတဲ့ယောကျြား
(၇) သစ်စာတရားကို ခဏအတှငျး စိတျမထိနျးပဲခြိုးဖောကျနိုငျတဲ့ယောကျြား
ဒီလိုယောကျြားမြိုးဟာ သငျ့မိသားစုထဲမှာပဲရှိနရှေိနေ သငျ့ခဈြသူအနနေဲ့ပဲရှိနရှေိနေ အခြိနျမလှနျခငျ သူ့ရဲ့ လောငျးရိပျအောကျကနေ အမွနျဆုံးနညျးနဲ့လှတျမွောကျ
အောငျကွိုးစားပါ။ လောကကွီးမှာ မှနျမွတျပွီးစညျးစောငျ့သိက်ခာရှိတဲ့ အမြိုးသားတှအေမြားကွီးရှိတာမလို့ ကိုယျ့ရဲ့ဘဝအတှကျ ပငျပနျးစတေဲ့ ဒီလိုယောကျြားမြိုးကို ဝေးဝေးကရှောငျပွီး သူတို့အပွောတှအေောကျမှာ မနဈမှနျးပါစနေဲ့….
လဲကျချိန်မှာ ပြန်ထနိုင်ဖို့ ဘယ်သူ့ဆီကခွန်အားတွေယူရမလဲ…💪💪